Gbanwee WordPress na Amazon na W3 Total Cache | Martech Zone
Tuesday, April 19, 2011 Tọzdee, Disemba 1, 2011 Douglas Karr
Cheta na: Kemgbe edere ihe a, anyị akwagala ọzọ WPEngine na a Nzipu Nwepụta ọdịnaya kwadoro Site StackPath CDN, CDN ngwa ngwa karịa Amazon.
Ọ bụrụ na ịgbaso blọgụ nwa oge, ị maara na m gbara ọgụ na WordPress. Site na igbe ahụ, WordPress bụ usoro njikwa ọdịnaya ngwa ngwa. Agbanyeghị, ozugbo ị mechara saịtị ahụ nke ọma wee nweta ya ebe ịchọrọ ya maka ndị ọrụ, ọ na-abụkarị nkịta. Oge oge anyị na-ebugharị na template ọhụrụ ahụ karịrị 10 sekọnd - arụmọrụ jọgburu onwe ya.
Anyị emeela ọtụtụ ihe iji nyere aka ngwa ngwa WordPress:
Anyị kpaliri ndị ọbịa MediaTemple. Ọtụtụ mgbe, mgbe ị debanyere aha maka ikpo okwu ị na-agbado na sava kachasị ọsọ ha. Ka usoro ha na-eto, agbanyeghị, ha anaghị edochi ndị sava ahụ na ndị ọsịsọ - ị ga-ahapụ ịhapụ gị.
Anyị gbakwunye sava nchekwa data. Mgbe WordPress na-agba ọsọ na ngwugwu Bochum dị mfe, ihe nkesa na-atụgharị koodu, na-eje ozi ihe oyiyi ma na-agba data ahụ. Ọ bụrụ na ịnwere ike ịgbakwunye ihe nkesa na nchekwa data na ngwugwu Bochum gị, ịnwere ike ịgbalite saịtị ahụ nke ọma.
Iji mee nkewa ọzọ, anyị na-etinye ihe oyiyi niile na Amazon dị ka a netwọk nnyefe ọdịnaya. Anyị na-eji ihe Amazon S3 ngwa mgbakwunye maka WordPress ma kemgbe ahụ kwụsịrị. Ihe mgbakwunye ahụ chọrọ ka ị kwụnye ihe oyiyi na Amazon ma ghara mekọrịta ihe oyiyi ahụ - ọ dịghị mma.
Anyị arụ ọrụ ugbu a W3 Total Cache site na W3Edge. Ọ bụ ezie na siri ike, ngwa mgbakwunye abụghị maka ndị obi na-adịghị ike ma ọ bụ ndị na-abụghị teknuzu. Aga m akwado ịkwado ọkachamara iji mejuputa ya.
Ihe mgbakwunye W3 Total Cache emeela ka anyị nwee ike itinye Amazon n'ọrụ dị ka Network Delivery Network anyị mana ngwa mgbakwunye ahụ na-emekọrịta ma na-edegharị ụzọ ụzọ onyonyo. Nke a bụ ụzọ dị egwu iji mejuputa ya n'ihi na ọ bụrụ na ị kpebie ịkwụsị iji ngwa mgbakwunye ma ọ bụ CDN, ịhapụghị gị na oyi. Gbanyụọ ngwa mgbakwunye a, ma ị ga-aga!
Ihe mgbakwunye ahụ na - enyekwa gị ohere cache peeji nke na gbara ajụjụ njụ data yana ọtụtụ ntọala ndị ọzọ. Amaghi ihe caching bu? N'ihi na a na peeji nke Ibu Ibu, na peeji na-agụ koodu, kpere nchekwa data gbara ajụjụ, na dynamically site na gị na peeji nke. Mgbe emebere caching, oge izizi mepere peeji ahụ, ọ na-egosipụta peeji ahụ ma dee ọdịnaya ahụ na faịlụ nchekwa. Oge ọzọ meghere peeji ahụ, ọ ga - emepe faịlụ a.
Edinggba ọsọ na saịtị gị nwere mmetụta dị ukwuu na ịgụ akwụkwọ gị karịa ka ị nwere ike iche. N'ezie, saịtị gị dị nwayọ nwayọ mgbe ịchọrọ ya ka ị rụọ ọrụ kacha mma - mgbe ọtụtụ puku ndị ọbịa nọ na ya. Ọ bụrụ na ịnweghị ya nke ọma (ma anyị ka na-arụ ọrụ na nke anyị), a na-ezokarị ndị ọbịa na ihuenyo oghere, mmejọ oge, ma ọ bụ na-ama gị ikpe mgbe ị na-eche peeji iji kwado di na nwunye. nke sekọnd.
Edinggba ọsọ na saịtị gị na-eme ka saịtị gị bụrụ enyi Google. Google kwadoro ya na ha toro saịtị dị elu karịa. Gafere ndụmọdụ ndị a dị n'elu, ị nwekwara ike ịrụ ọrụ iji belata nha onyonyo gị na saịtị gị, mejuputa mkpakọ peeji, mejuputa EC2 ma ọ bụ Akamai dabere na ntanetị nnyefe ọdịnaya… na ọbụnadị ịkwaga ịkwado na mmekọrịta. Nke ahụ na-abanye n'ime nnukwu ego, agbanyeghị!
Nlekota oru isiokwu Nkesa?
Apr 19, 2011 na 11: 52 PM
Ezigbo Post - M kwagara Media Temple n'oge na-adịbeghị anya ma na-agbasi mbọ ike na ịgbatị saịtị m Anglotopia. Mgbe ịghagharịrị, ọ bịara nwayọ nwayọ ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ gara aga na GoDaddy. Kemgbe ahụ, etinyela m W3 Total Cache, agbakwunye CDN ma kachasị ihe ndị ọzọ kachasị mma, oge m na-ebu ihe dị ka 9-10 sekọnd ugbu a - nke kachasị mma na ọnwa. Ọ ka kwesịrị imeziwanye. Enwere m ike ịnwa ịnweta ihe nkesa na nchekwa data ọzọ. Ugbu a, achọrọ m ijide n'aka na ihe nkesa ahụ na-arụ ọrụ ka m na-atụ anya iju mmiri nke okporo ụzọ maka mkpuchi agbamakwụkwọ anyị n'izu na-abịa.